मेस्सी पेनाल्टीमा चुक्दा अर्जेन्टिना आइसल्याण्डसँग बराबरीमा रोकियो ! - मेस्सी पेनाल्टीमा चुक्दा अर्जेन्टिना आइसल्याण्डसँग बराबरीमा रोकियो !
मेस्सी पेनाल्टीमा चुक्दा अर्जेन्टिना आइसल्याण्डसँग बराबरीमा रोकियो !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २ असार, 04:38:39 PM
काठमाडौं । अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सी फेरी एकपटक पेनाल्टीमा नराम्रोसँग चुकेका छन् । यसअघि तीनपटक फाइनल पुगेपनि कोपा अमेरिकामा पेनाल्टीमा अभागी साबित भएका मेस्सी रुस विश्वकपको उद्घाटन खेलमै खराब फर्मबाट गुज्रिएका छन् ।
उनले गोल त गर्न सकेनन् नै । जित पक्का हुने पेनाल्टीमा मेस्सीले गोल गर्न नसक्दा अर्जेन्टिना कमजोर मानिएको आइसल्याण्डसँग एक एक गोलको बराबरीमा रोकिन पुग्यो ।
शनिबार राती समूह डीको पहिलो खेलमा अर्जेन्टिनाले बराबरी खेलेपछि आइसल्याण्ड पनि हारबाट जोगियो । खेलमा म्यान सिटीका फरवार्ड सर्जियो अग्युरोले १९ आँै मिनेटमा गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई अग्रता दिलाएका थिए । तर त्यसको पाँच मिनेटमै आइसल्याण्डले बराबरी गोल फर्कायो ।
उसका लागि स्ट्राइकर अल्फ्रेड फिन्बोगासनले २४ आँै मिनेटमा आकर्षक गोल गरे । पहिलो हाफ बराबरीमा सकियो ।
तर पछि दोश्रो हाफको ६४ औँ मिनेटमा अर्जेन्टिनालाई राम्रो अवसर आयो । जुन मेस्सीका लागि शानदार शुरुवात हुन सक्थ्यो । तर उनले बारलाई च्यापेर बल हान्न नसक्दा आइसल्याण्डका हालडोर्सनले सहजै मेस्सीको पेनाल्टी विफल पारिदिए ।
त्यसपछि मानसिक दबाबमा परेको अर्जेन्टिनाका लागि मेस्सीले केही राम्रा अवसर पाएपनि गोल गर्न सकेनन् । गएराती समुह बी मा रहेको पोर्चुगलका लागि क्रिष्टियानो रोनाल्डोले स्पेनसँगको खेलमा ह्याटिक गर्दा मेस्सीलाई आज उत्कृष्ट खेल्नुपर्ने दबाब थियो ।
तर उनले युरोकप च्याम्पियन रोनाल्डोजस्तो उत्कृष्ट खेल्न सकेनन् । बरु पाएको राम्रो अवसरलाई पनि खेर फालिदिए । सन् २०१४ को विश्वकपमा जर्मनीसँग फाइनलमा हार व्यहोरेको अर्जेन्टिना मेस्सीमै निर्भर छ ।
तर उनको प्रदर्शन यस्तै फितलो रह्यो भने अर्जेन्टिना रुस विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरिने खतरा बढेको छ ।
२०७५, २ असार, 04:38:39 PM